'TRANSPHOBIC LESBIANS' 'SHAGGABLE' 'ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းအတွက်ရှီးဖီးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ - သတင်း
'transphobic lesbians' 'shaggable' 'ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းအတွက်ရှီးဖီးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ
Sheffield တက္ကသိုလ်မှအကြီးတန်းပါမောက္ခတစ် ဦး အနေဖြင့် transphobic lesbians များကို shaggable ဟုမေးသည့်အပါအ ၀ င် tweets အမြောက်အများကိုဝေဖန်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း The Tab Sheffield ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဖော်ပြသည်။
တက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒဥက္ကChair္ဌ Sally Hines သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည်ဟုစွပ်စွဲခံရပြီးလိင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏မှတ်ချက်အချို့အပေါ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကျား၊ မရေးရာလေ့လာမှု၏ပါမောက္ခသည်ကျား၊ မရေးရာအမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့်အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုများတွင်မကြာခဏပါဝင်လေ့ရှိသည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများသည်လိင်အခြေခံသောအခွင့်အရေးများကို trans အခွင့်အရေးများနှင့်အတူထိန်းသိမ်းသင့်သည် ဟူ၍ ငြင်းခုန်ကြသည်။ ထိုသို့သောအငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင်ဟင်းစင်းများသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်တူချစ်သူများအား lezzies နှင့် homos ဟုရည်ညွှန်းသည်။
Hines ကစွပ်စွဲချက်များကိုငြင်းဆိုသည်။ မှတ်ချက်ပေးရန် Tab Sheffield ကသူမထံချဉ်းကပ်လာကတည်းကသူမမှာအနည်းဆုံး tweets ၁၈ ခုဖျက်သိမ်းပြီးသူမရဲ့အကောင့်ကိုအများပိုင်မှပုဂ္ဂလိကသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
သို့သော် The Tab Sheffield သည်သူဖျက်လိုက်သော tweets အချို့၏ဖန်သားပြင်များကိုရိုက်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာတက္ကသိုလ် Hines အများပြည်သူမျက်စိကနေ tweets ဖုံးကွယ်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
Sheffield တက္ကသိုလ်မှသူတို့သည်သူတို့၏လူမှုမီဒီယာပေါ်လစီအားချိုးဖောက်မှုအဖြစ်တွစ်တာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမည်၊ မရှုံးသည်ကိုမူငြင်းဆိုသည်။ အမှုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်မှတ်ချက်မပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပို့လက်ခံမှုအက္ခရာများ clemson မည်သည့်အခါ
2019 ဇန်နဝါရီလ tweet တစ်ခုမှာ, Hines မေးတယ်: transphobic လိင်တူချစ်သူနေဆဲ shagable နိုင်သလား? [လုပ်နည်းများ]
Hines သည်လီဒက်စ်တက္ကသိုလ်ရှိကျား၊ မရေးရာလေ့လာမှုဌာန၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလတွင် Russell Group ၏လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဥက္ကဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
သူမ၏တက္ကသိုလ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပရိုဖိုင်း သူမသည်အမျိုးသမီးသီအိုရီ၊ ကျားမလေ့လာမှု၊ ဝိသေသလက္ခဏာ၊ မျိုးပွားမှု၊ လိင်လေ့လာမှုနှင့်လိင်အကြောင်းများကိုသူမသင်ကြားသည်။
သူမသည်အကြီးတန်းရာထူးတွင်ခန့်အပ်ခံရပြီးကတည်းကသူမ၏တွစ်တာများပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ကတွစ်တာတစ်ခုတွင်ဟိုင်စင်းများသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်တူချစ်သူများအား lezzies၊ homos နှင့် dykes ဟုရည်ညွှန်းသည်။
ဟိန်းစ်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - 'ဂျိမ်းစ် et al ကပဲ lezzie ကိုနှစ်သက်တယ်။ GCF များသည် sapphic ကိုရိုးရှင်းစွာကိုးကွယ်ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာတိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်အမှန်တကယ်မှားယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အိမ်မက်မက်မက်မက်မက်မက်မက်ဆန်နာသည်မိန်းမကိုယ်နှင့်ပိုတူသည်ဟုဆိုလိုလျှင်၊ သို့သော်အဘယ်သူမျှမ #cliteraferance dikes ။
အဆိုပါ doge meme ဖန်တီးခဲ့သည့်အခါ
အခြားတွစ်တာစာစောင်များတွင်အသုံးပြုသူ Lily J Adams က Hines သို့မေးမြန်းခဲ့သည် - အမှန်စင်စစ်၊ လိင်တူချစ်သူများအားကူညီပံ့ပိုးရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားရှုတ်ချသည့်အနေနှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကဘာလဲ။
ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ 'လိင်တူဆက်ဆံသူ' လို့အလေးအနက်ထားတဲ့ဘယ်သူတွေလဲ။ ဤမှတ်ချက်သည်ပြင်းထန်သော ၁၄၇ မှတ်ဖြင့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး က Hines ကိုဤသို့ပြောခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်ဤသည်သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည့်အမုန်းစကားများနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
Hines သည်အစိုးရ၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေထားသော“ Trans Pregnancy” အမည်ရသုတေသနပရောဂျက်မှာသူမအားတွစ်တာဇီဝအတတ်ပညာတွင်အပြည့်အဝရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏တွစ်တာအသုံးပြုခြင်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ဖြစ်သည်ဟု Sheffield Tab သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
post တစ်ခုတွင်ဟိန်းစ်ကလိင်တူဆက်ဆံသူဟုဟန်ဆောင်သည့်လိင်တူချစ်သူများအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ 'ညာတောင်ပံကအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများအဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားသောလိင်တူချစ်သူများလိင်တူဆက်ဆံသူဟန်ဆောင်သည့်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ဟန်ဆောင်သည် ယေရှုသည်အမှန်ပင်မျက်ရည်ကျတော်မူ၏။ ထိုအခါငါ * ငါလူမှုရေးဆောက်လုပ်ရေးပေါ့ !! '
အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုတွင်သူမကတွစ်တာအသုံးပြုသူအား 'ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်၊ ဆုတောင်းပါ၊ ' လိင်တူချစ်သူများအား 'ကာကွယ်ရန်' သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကဘာလဲ
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ကကျား၊ မရေးရာအမျိုးသမီးရေးရာဝါဒီများနှင့်တွစ်တာစကားပြောဆိုမှုတွင်ဟင်းစင်းကရိုးရှင်းစွာရေးသားခဲ့သည်။ အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကသူမအရက်မူးနေသလားဟုမေးမြန်းသောအခါသူက“ ငါမမူးဘူး၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။
တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမူဝါဒ အခြားသူများကိုမလိုလားအပ်သောပြစ်မှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ တက္ကသိုလ်က ၀ န်ထမ်းများ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် 'စွပ်စွဲချက်မှားယွင်းစွာပြုမူမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်' အတွက်ဖြစ်သည်။
Hines ၏တွစ်တာများသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးရာနှင့်ချီသောတွစ်တာအသုံးပြုသူများသည်သူမ၏ထင်မြင်ချက်များကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည်။ သူမနှင့်သဘောမတူသောအမျိုးသမီးများအားရှုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော misogyny သည်သူမသီးခြားပြောဆိုသည့်အရာကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
အခြားတစ် ဦး ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - သင်သည်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုကိုသူတို့၏အနိုင်ကျင့်မှုကိုလျှော့ချရုံတင်မကသင်ပြုခဲ့သလား။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထိုးစစ် reductive နှင့်ရယ်စရာသို့မဟုတ်တစ် ဦး '' ဟာသ '၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ် ဦး ကဤသို့မှတ်ချက်ချသည် - misogyny သည်မေးရိုးကျဆင်းသည်။
Sibyl Ruth က Sheffield တက္ကသိုလ်အားဝေဖန်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ @sheffielduni မှမှတ်ချက်များကကူညီလိမ့်မည်။ အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး က '' ကာကွယ်ရေးလူနည်းစုကိုဖော်ပြသည့်ဝေါဟာရများကိုသင်နားလည်ရန်ခက်ခဲကြောင်း @sheffielduni သိလား။
Hines ကသူမရဲ့ 'shaggable' tweet ကိုတုန့်ပြန်တဲ့သူတွေကိုတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လှောင်ပြောင်တဲ့တွစ်တာတို့နဲ့ဒီနေ့ငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကတော့မှတ်ချက်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။
ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း၊ တက္ကသိုလ်သည်လိင်ဆိုင်ရာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံသည့်စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တွစ်တာများနှင့်စွပ်စွဲချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Hines က Sheffield Tab သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အီးမေးလ်မှာရေးထားတဲ့ tweets တွေဟာအခြေအနေအားလုံးထဲကနေဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုငါထောက်ပြချင်တယ်။ , ဒီမှာရည်ညွှန်းပညာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ * အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလက်ရှိဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ အခြား queer အမျိုးသမီးများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့် tweets များရှိသည့် queer အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့် homophobia ၏စွပ်စွဲချက်များသည် [sic]၊
Sheffield တက္ကသိုလ်မှထင်မြင်ချက်ပေးရန်အစပိုင်းတွင်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် Sheffield Tab မှအွန်လိုင်းတန်ပြန်မှုကိုသတိပေးပြီးနောက်၊
အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး က 'တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေခံမူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားဥပဒေအတွင်းရှိယုံကြည်ချက်များနှင့်ရာထူးအမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ရန်၊
တက္ကသိုလ်မှ ၀ န်ထမ်းများ၏မျှော်မှန်းထားသည့်လူမှုမီဒီယာတွင်လမ်းညွှန်ချက်များပေးပြီးလိုအပ်သည့်နေရာတွင်အရေးယူလိမ့်မည်။